चीन ज्याक मा जस्ता व्यवसायीहरुलाई कारबाही गरेर के हासिल गर्न चाहन्छ ? - Technology Khabar
» ताजा समाचार » चीन ज्याक मा जस्ता व्यवसायीहरुलाई कारबाही गरेर के हासिल गर्न चाहन्छ ?
चीन ज्याक मा जस्ता व्यवसायीहरुलाई कारबाही गरेर के हासिल गर्न चाहन्छ ?
Technology Khabar २९ भाद्र २०७८, मंगलवार
चिनियाँ उद्योगपति ज्याक मालाई कुनैबेला चीनको प्रगतिको प्रतिकका रुपमा लिइन्थ्यो । ज्याक माको जीवनमा सबैकुरा राम्रैसँग चलिरहेको थियो । उनको कम्पनी ‘अलिबाबा’ वित्तीय यूनिट ‘ग्रुपो हारमिगा’ सन् २०२० को नोभेम्बरमा हङकङ र साङघाईको सेयर बजारमा सूचिकृत हुँदै थियो ।
यसले ग्रुपो हरमिगाको मूल्य ३४.४ अर्ब डलरको छेउछाउ पुग्ने आँकलन थियो । र, यो अलिबाबाको इतिहासमा कोसेढुङ्गा सावित हुने ठानिएको थियो । तर अन्तिमका समयमा सबैकुरा बदलियो।
चीनका वित्तीय नियामकले बजारमा प्रतिष्पर्धासँग जोडिएको चिन्तालाई कारक मान्दै सूचिकृत हुने प्रक्रियामा रोक लगाएका थिए । यतिमात्रै होइन, सूचिकृत हुने कार्यक्रममा बिजुलीको आपूर्तिसमेत बन्द गरिएको थियो । उनीहरुले कार्यक्रममा बजिरहेको संगीतसमेत रोक्दै अतिथिलाई घर फर्किन बाध्य पारिएको थियो ।
यसपछि चीन सरकारले अलिबाबा कम्पनीलाई पुनर्गठनको आदेश दियो ।
यो अप्रत्यासित फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । तर त्यतिबेला केही मान्छेहरुले मात्रै अलिबाबालाई लगाइएको लगाम चीनका ठूला टेक्नोलोजी कम्पनीविरुद्ध सि चिनफिङ सरकारले गरेको कारबाहीको शुरुवात हो भन्ने ठानेका थिए ।
उद्योगपति ज्याक माको आर्थिक साम्राज्यको मेरुदण्ड इकमर्श कम्पनी अलिबाबालाई यही अप्रिलमा २.८ अर्ब डलरको जरिवाना लगाइएको थियो । चीनको आर्थिक इतिहासमा कुनैपनि कम्पनीलाई लगाइएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जरिवाना हो ।
कम्पनीले बजारमा आफ्नो प्रभावशाली स्थितिको दुरुपयोग गरेको कारण जरिवाना गरिएको दाबी गरिएको थियो ।
अलीबाबा, डीडी र मेइतुआनले छुट्टाछुट्टै बयान जारी गर्दै सरकारको फैसलालाई साथ सहयोग दिने बताएका छन् ।
सरकारले नयाँ प्रतिबन्धको प्रभावमा परेका कम्पनीमा टेनसेन्ट (इन्टरनेट कम्पनी), मेइतुआन (फुड डेलिभरी), पिड्युओड्युओ (इकमर्स), डीडी(एप आधारित क्याब सर्भिस), फुल ट्रक एलायन्स, कान्झुम (रिक्रुटमेन्ट), न्यू ओरियन्टल एजुकेशन (अनलाइन एजुकेशन) आदि छन् ।
यो सिलसिलामा ताजा मुद्दा इलेक्ट्रिक कार बनाउने कम्पनी बीवाईडीको छ । बीवाईडीको चिप मेकिङ युनिटको हिस्सा बेच्ने योजना थियो तर सरकारी जाँचका कारण यो प्रक्रियालाई बीचमा नै रोक्नुपर्यो ।
आधिकारिक मिडिया रिपोर्टका अनुसार चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा बैठकमा राष्ट्रपति सि चिनफिङले चीनका टेक्नोलोजी कम्पनीमाथिको नियन्त्रणको बचाउ गरेका थिए ।
सि चिनफिङले टेक्नोलोजी कम्पनीविरुद्ध भइरहेको कारबाहीलाई आफ्नो उद्देश्य निस्सार पूँजी बिस्तारलाई रोक्नु र यसको अगणित प्रगतिसँग लड्नु रहेको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।
उनले कारबाहीलाई अझै बढाउने चेतावनी दिएका थिए । सि चिनफिङले समाजवादी बजार अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि सर्वसाधारणको जीवन गुणस्तरीय बनाउनका लागि कारबाही आवश्यक भएको बताएका थिए ।
ज्याक माले सरकारको आलोचना गरे । त्यसपछि सरकारले उनको कम्पनीसँग जोडिएको आइपीओ रोक्ने फैसला गर्यो । दीदीको हकमा पनि यही भयो । दीदीले भने सरकारी निर्देशनको पालना गरेको थिएन ।
सरकारले यी कम्पनीलाई सजाय नदिई छाड्न सकिन्न भन्ने दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको थियो । यहाँ लगाम कसको हातमा छ रु भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ।
ग्रुपो हारमिगाको आइपिओमा रोक लगाएपछि सरकारले अन्य टेक्नोलोजी कम्पनीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यी कम्पनीहरु इकमर्श, ट्रान्सपोर्टेसन, फिनटेक, भिडियो गेम्स र अनलाइन एजुकेसन, व्यवसायसँग सम्बन्धित छन् ।
टेक्नोलोजी कम्पनीका विरुद्ध चलिरहेको सरकारी बारबाहीमा सि चिनफिङ सरकारले यी सबै मुद्दाहरु एकअर्कासँग सम्बन्धित नभएको बताएको छ । कम्पनी विरुद्धका फैसलालाई यथोचित ठहर्याउनका लागि एकाधिकारलाई रोक्नु र प्रयोगकर्ताको डाटा संरक्षण गर्नु मुख्य विषय रहेको तर्कको सहारा लिइएको छ ।
यो सिलसिलामा हालसालै संवेदनशील व्यक्तिगत डाटालाई अवैध तरिकाले हासिल गर्ने कम्पनीको कामकाजलाई निलम्बन गर्ने वा त्यसलाई रद्दपनि गर्न सकिने कानून पारित गरिएको छ ।
धेरै विश्लेषकले सरकारको यो कदमलाई कम्पनीमाथिको नियन्त्रणको प्रयासका रुपमा विश्लेषण गरेका छन् ।
टेक्नोलोजी कम्पनी शिकारको यो अभियानमा डाटा सुरक्षाको समीक्षा गरिएको छ । कम्पनी नियन्त्रणका लागि अगणित पुँजी बिस्तारको तर्कको सहारा लिइएको छ ।
अघिल्लो वर्ष डिसेम्बरमा सरकारले यो मुद्दा उचालेको थियो ।
‘सर्वसाधारणको समृद्धि’ सि चिनफिङ सरकारको नयाँ मन्त्र हो । सरकारले संसाधन र पुनर्वितरण एवं कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धालाई बढाउनका लागि यो कदम चालिनु आवश्यक भएको बताएको छ ।
सिंगापुरको एउटा बिजनेस स्कुलमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका प्रोफेसर माइकल बिटले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले टेक्नोलोजी क्षेत्रको बिस्तारमा रोक लगाउन चाहेको बताउँछन् ।
अमेरिकी थिंकट्यांक पिटर्सन इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल इकोनोमिक्सका अध्येता मार्टिन चोर्जेंपाले चीन सरकारले कम्पनीको नियन्त्रण बाहेक अरुकुरापनि चाहेको बताउँछन् । मार्टिन यसका मुख्य कारणमा सर्वसाधारणको गोपनीयतासँग जोडिएका डाटाको विश्वासिलो संरक्षण र संसारभरका समाजमा बढिरहेको टेक्नोलोजीको प्रयोगले जुन नोक्सानी भइरहेको छ त्यसलाई रोक्नु हुनसक्ने बताउँछन् ।
मार्टिन डाटाको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको कुरा गरिरहँदा कम्पनीलाई लगाइने कडा कानूनले गर्दा निजी कम्पनीहरु फल्नेफुल्ने कुरा सोच्नै सकिँदैन र यही नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भन्छन् ।
युनिभर्सिटी अफ हङकङको चाइनिज ल सेन्टरकी निर्देशक एङगेला झाङले चिनियाँ टेक्नोलोजी कम्पनीहरुले अहिलेसम्म लचिलो वातावरणमा काम गर्दै आएको तर अब यी कम्पनीका लागि कडा कानून तय गरिने बताइन् ।
उनले अमेरिका र यूरोपका देशहरुले पनि प्रविधि क्षेत्रमा यस्तै नियन्त्रण बढाइरहेको बताइन् ।
लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका विशेषज्ञ केयु जिनले चीनको उद्देश्य प्राविधिक प्रभुत्व स्थापित गर्नु हो भन्ने तर्क दिन्छन् । यसबाट चीनले प्रमुख क्षेत्रमा ग्लोबल स्ट्याण्डर्ड स्थापित गर्न सक्ने र यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा चीनको प्रभाव बढ्ने उनको तर्क छ।
चीन सरकारको रुचि उपभोक्तालाई सुविधा दिने इकमर्श प्रविधि कम्पनीभन्दा रणनीतिक रुपमा महत्वका मानिने क्वान्टम कम्प्युटर्स, सेमिकन्डक्टर र स्याटेलाइट क्षेत्रको विकासमा धेरै देखिएको छ।
केही विश्लेषकहरु चीन सरकारले चिनियाँ कम्पनीमा विदेशी कम्पनीको पहुँचलाई सीमित पार्न चाहेको बताउँछन् ।
कन्सल्टेन्सी फर्म मार्कम बर्नस्टीन एण्ड पिनचक(एमबीपी)का अध्यक्ष ड्रयू बर्नस्टीनले चीनमा भइरहेको परिवर्तनबाट चीन सरकाले टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा आफूलाई नक्कल गर्ने कपिक्याटका रुपमा भन्दापनि बाघका रुपमा पेश गर्न चाहेको बताउँछन् ।
यसबाहेक सन् २०२५ का लागि चीन सरकारको योजना पनि एउटा मुद्दा हो । चीन सरकारले आफ्नो अर्थव्यवस्थाको ठूलो हिस्सालाई कडाइका साथ कानून लगाउन चाहेको बताइएको छ। बीबीसी
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७८, मंगलवार
साइबर सुरक्षा र चुनौती विषयमा छलफल हुँदै
कम्प्युटर प्रणालीबाट जिल्ला अस्पतालको काम
क्यान महासंघ चुनावी माहौल: स्वतन्त्र उम्मेदवार नारायण प्रकाश भुजूले कुँवर पक्षबाट चुनाव लड्ने
टोकियो ओलम्पिकको सम्मानमा गुगल डुडल तयार, खेल्ने होईन् त एनिमेटेड डुडल गेम ?
विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग बारेमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई तालिम
साहारा एपले ल्यायो ‘धमाकेदार दशैँ अफर’
मेट्रो अनलाइन ट्याक्सी सेवा शुरु, काठमाडौं उपत्यकामा ९९ रुपैयाँमै ट्याक्सी चढ्न पाईने
नेटफ्लिक्सद्वारा एन्ड्रोइड डिभाइसका लागि नि:शुल्क योजना सार्वजनिक
फेसबुकले ल्याएको पोर्टल गो तथा पोर्टल प्लस के हो? कस्ता छन् विशेषता?